‘वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ’
– रेखा चन्द काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर, निजी क्षेत्र केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने आशामा छन्। सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाइरहेका छन्। पूर्वबैंकर एवं वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराईले वित्तीय...
बजारको वस्तुस्थिति बुझेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ: पूर्वगर्भनर रावल
– रेखा चन्द काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा. तिलक रावलले बजारको वस्तुस्थिति बुझेरमात्रै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। बिजशालासँगको कुराकानीमा पूर्वगभर्नर रावलले बजारको वस्तुस्थितिका बारेमा अनुगमन गरेरमात्रै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘ब्याजदर,...
बजेटका गलत नीतिले अर्थतन्त्रमा परेको असर राष्ट्र बैंकले सच्याउनुपर्छ : पूर्वगभर्नर क्षेत्री
– रेखा चन्द काठमाण्डौ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त छ। सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएसँगै राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले केही दिनअघि एक सूचना जारी गर्दै मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव दिन आग्रह गरेको छ...
रु. १५ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र २०८४ ‘छ’ जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले असार ८ गते ५ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र भोलि असार ७ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ। यो ऋणपत्रमा इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित...
रु. २५.५३ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि असार ६ गते (सोमबार) २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्दैछ। केन्द्रीय बैंकले असार ७ गते जारी गर्न लागेको २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो बिल साउन ३ गते परिपक्व...
असारबाट बैंकहरुको बिदा तथा बैंकिङ समयमा पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिदा र कार्यालय समय असार १ गतेबाट पूर्ववत व्यवस्थाअनुसार लागू हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै २०७८ चैत ६ गते गभर्नरबाट सदर टिप्पणीअनुसारको २०७९ सालका लागि निर्धारित बैंक बिदा सूची, कार्यालय समय र बैंकिङ कारोबार समयसम्बन्धी पूर्ववत् व्यवस्था असार १ गतेबाट लागू...
वाणिज्य बैंकहरुका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले डाक्यो आकस्मिक छलफलमा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई आज आकस्मिक छलफलका लागि बोलाएको छ। राष्ट्र बैंकमा दिउँसो ३ बजेका लागि छलफल राखिएको भन्ने खबर आएको एक वाणिज्य बैंकका सीईओ जानकारी दिए। राष्ट्र बैंक स्रोतले समेत सीईओहरुलाई बोलाइएको पुष्टि गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, बैंकहरुको सीडी रेसियो र...
रु. २० अर्बको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जेठ ३० गते (सोमबार) २० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्दैछ। केन्द्रीय बैंकले भोलि जेठ ३१ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो भदौ २८ गते परिपक्व...
रु. २० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, सोमबार बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि जेठ ३० गते (सोमबार) २० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ ३१ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो भदौ २८ गते...
मुद्रास्फीति १००% बढीले बढ्यो, कस्तो छ विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था ?
काठमाण्डौ । देशमा मुद्रास्फीति दोब्बरले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही महिनाको तुलनामा सतप्रतिशतभन्दा बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही...
अमेरिकी डलरको भाउ नयाँ उचाइमा, कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२४.७३ रुपैयाँ तोकेको छ। जुन हालसम्मकै उच्च हो। हिजो बिहीबार १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२४.६८ रुपैयाँ तोकेको थियो। यसअघि जेठ ६ मा अमेरिकी डलरको भाउ १२४.६७ रुपैयाँ पुगेको थियो। गत...
विप्रेषण कारोबारको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले ल्यायो नयाँ विनियमावली (दस्तावेजसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ लागू भएको छ। केन्द्रीय बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त गरी विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनाका लािग यो विनियमावली तयार गरी लागू गरेको हो। विप्रेषण कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन...
उच्चपदस्थ व्यक्तिको खातामा निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिए विवरण पठाउन राष्ट्रबैंकको निर्देशन
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्चपदस्थ स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिको बैंक खाता निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिए जानकारी गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामासंशोधन गर्दै यस्तो...
डलरको विनिमय दर हालसम्मकै उच्च
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा बिहीबार अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि १ अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १२४.६८ रुपैयाँ कायम गरेको छ जुन हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत जेठ ६ मा डलर भाउ १२४.६७ रुपैयाँ पुगेको थियो। पछिल्ला दिनहरुमा डलरको भाउ लगातार बढिरहेको छ । केही महिनायता अमेरिकी...
निलम्बनपछि पहिलोपटक अर्थमन्त्री-गभर्नरबीच कुराकानी, मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल
काठमाण्डौ । निलम्बन र पुनर्बहालीपछि पहिलोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कुराकानी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आज बिहान अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच कुराकानी भएको हो। आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा परामर्श गर्न अधिकारी अर्थमन्त्री शर्मासँग भेट्न पुगेका थिए। आउँदो असार मसान्तसम्म...